AmaMelika isizwe impikiswano. Kwelinye izwe, ukuzwana ukubekezelelana ezincane, ukubekezelelana, emakethe mahhala, kanye individualization of izindleko eliphezulu kakhulu impi kanye ukuzibandakanya njalo ezimpini ezinkulu. Inkambu zokugcina ukulwa, ngokuvumelana umphakathi we-inthanethi, kwaba-Ukraine. Phela Maidana baqala ukukhuluma le ngxabano elilandelayo phakathi American futhi Russian. Kukhunjulwe futhi Lensimbi, futhi feuds esidlule. Ukuze kuphakama eziningi umbuzo, lokutawulandzela. Kungani baseMelika wesabe Russian? Lokwesaba nhlobo?
Ngaphambi kokuba siphendule le mibuzo, kudingeka ugxumele umlando United States futhi ukuba siqonde ukuthi kungani phesheya waqonda njengoba umhlaseli main. Engingakusho nje ngokuhlale sikhumbula indlela ukuqala indaba yabo. Burning umhlaba amaNdiya kanye kuqothulwe izizwe lonke nempucuko - ngisho ejwayelekile, kodwa hhayi ekuqaleni best for isizwe ovulekile kusuka iphuzu wamanje umbono. Kufanele kuqashelwe ukuthi Iroquois abangu kakhulu ufundile futhi abantu okuqhubekayo, futhi owaziyo ukuthi yini angathanda oyibeke umlando besinde impucuko yabo. Futhi okubaluleke nakakhulu, kungakhathaliseki ukuthi yini kwaba Europe, hhayi ukuyinqoba hhayi ukwandisa nokwanda kwalo ku amazwekazi aseNyakatho naseNingizimu Melika.
USA ekhulwini XIX
Ekuqaleni kwekhulu XIX isitha eyinhloko amaMelika kwaba Europe, nezimiso zayo olandelanayo lamaKatolika. BaseMelika bedelela konke European, zenani siqu sakhe "self" futhi wokuziqambela, futhi nakubheka ngokwabo njengesizwe okhethwe uNkulunkulu.
Ngesikhathi esifanayo, ukuhweba ngezigqila yanda. Futhi uma abantu abamnyama, hhayi isitha amaMelika abantu amalungelo nenkululeko odelelekile, ngokombono wabo, aphansi, ngalokho kungahlali "nedolyudey". Isimo Chauvinist ngase abamnyama e-United States waqhubeka ekuqaleni kwekhulu XX, lapho izikhungo of the lynching kwabantu abamnyama zalotshwa.
Melika ngokumelene Japan
Phakathi kwempi yezwe yesibili, ngaphezu eJalimane kaHitler, amaMelika babe ilwa neJapane. I ubutha phakathi kwalezi zizwe ezimbili phezu izenzakalo udabuke, "Pearl Harbor", okuyinto wawudla izindwali cishe lonke US imikhumbi abulala amasosha amaningi, kanye nokuhoxiswa kwamacala enyukliya eHiroshima futhi Nagasaki, zabulala abantu abaningi, abanye babo bafa kusukela njalo yokuchayeka emisebeni ye ngemva .
Ngemva kwalokho, amaMelika, njengoba kufanele abawinile, izinhlawulo olunzima onikezwe umbuso Japanese, okuyinto kube nomthelela omubi emnothweni yayo.
Lensimbi futhi impi phakathi amabili ayizikhondlakhondla zezikhali
Ngemva kwempi yezwe yesibili, isitha esikhulu-United States waba eSoviet Union. Ngaphezu izingalo lempi uhlanga, kwala mazwe womabili baye basungula ubunhloli futhi isikhala izinhlelo. Kubonakala sengathi ngemva Lensimbi, inkulumo mutual ngokumelene nomunye futhi inhlangano e umfelandawonye ephikisayo, ngaphandle esibucayi Balkan, umbuzo wokuthi kungani baseMelika besaba isiRashiya, uzonyamalala ngokwalo. Nakuba-ke Kuyaphawuleka ukuthi umbango phakathi amabili ayizikhondlakhondla zezikhali phakathi nekhulu XX wanika emhlabeni impumelelo enkulu kangako enjengokufa indiza emkhathini bavimba imigwaqo, kokufika on enyangeni, ukuthuthukiswa emkhakheni wesayensi yenuzi, neyezinto eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, athuthukiswe kanye nalokho okumele izikhungo kwezombusazwe nakwezomnotho, eyayibonakala kamuva kunezimpande enkulu emibonweni yabantu nasendleleni lamazwe amabili. Ukuthuthukiswa kwezikhungo okwenziwe ngezinqubo zobuchwepheshe obuphambili Amasimu, kanye ukukhiqizwa yezimboni wanika abantu imisebenzi ukuthi wabalungiselela umpheme ngokuvamile ngcono izimpilo zezakhamuzi. Ngeshwa kithi, kule nkinga ye-USSR udliwe.
Ukuze uqonde imbangela ukunqotshwa, kubalulekile ukuba shí nesayensi yezenhlalo nezombusazwe. Ngemva kokufunda imisebenzi sezokuhlalisana kwabantu ezidumile Futurist uFrancis Fukuyama, okungukuthi "Ukuphazamiseka Okukhulu" futhi "Thembela", ungakwazi ngokushesha ukunquma ukuthi isigaba sabefundisi isimiso sezombangazwe kanye nezokuphatha zase-USSR, esekelwe izimboni eqolo nge amazinga aphansi yokuqiniseka abasebenzi, wawuzofekela. Nakuba zeselula njalo kunethiwekhi yayo, elisekelwe ekwethembeni futhi ukwanda umthwalo isisebenzi abavamile avunyelwe Melika ukuba singangeni ngenkani kolwazi ngehhashi. Isibonelo esimangalisayo izinkampani mobile abanjalo 'Silicon Valley "yenkampani e-United States abaneminyaka bazimisele ukuzifaka ezingozini futhi akesabi ukubiza isikhathi, okungukuthi Apple uSteve Imisebenzi ne-Microsoft Usihlalo-Bill Gates.
amandla enuzi Russian
Sisondela Impendulo yombuzo othi kungani baseMelika besaba Russian. Kufinyeta bonke ngenhla umusho owodwa: Melika uyaqonda ukuthi kuwo wonke umlando, esikhathini esiningi kuba wodweshu. Futhi manje kuyacaca emhlabeni wonke.
Manje ake sixoxe amabutho Russia. BaseMelika besaba Russian njengoba izwe kakhulu elikhulu kunawo wonke embusweni linenani elikhulu sezikhali zenuzi, enamandla okubhubhisa iplanethi izikhathi eziningana. Ngakho-ke, le nqubomgomo wezempi we-USA, yalahla iRussia ayivumelekile a priori. AmaMelika esabe. Russia ayikwazi ngaphansi emoyeni noma angene ensimini amaviyo alo. Lokho kusho nezindlela umzabalazo wokulwa kufanele ibe khona ehlukile. Nakuba njalo isengozini declassified bese bekhanyisa uthuthumele. Ngakho, okungenani emva kokuba icala, "WikiLeaks" futhi Julian Assange zibe zimbi kakhulu ubudlelwane we-European Union ne-United States.
amasosha Russian Omkhulu
amaMelika besaba khona amasosha Russian? Ukuze ukhathazeke ngabo, okungenani ngokwanele. Lokhu ukuhamba yabashokobezi ngesikhathi Okwesibili Umhlaba futhi kugcina kungenele, anamandla nesibindi amasosha aseSoviet ngo-iMpi Yezwe II, sihlale sikhumbula lesishiyagalolunye May, kanye isibindi yebutho Russian e nezimpi Chechnya. Konke lokhu kusikisela ukuthi ibutho Russian is hhayi kuphela abaqeqeshwe kweminyaka eminingi impi eside, kodwa ala ukuvikela ezweni lenkaba yawo. Abacebile umlando isiRashiya, ukunqoba Russian Empire, amandla kweSoviet amabutho ahlomile - impendulo yombuzo kungani baseMelika besaba Russian Special Forces abe iphethini yesimanje.
amaMelika besaba abantu Russian?
Ngakolunye uhlangothi, uyajabula ngokuthi lubhakuza emhlabeni isethi Russian ngokwalokho esikucabangayo. Eqinisweni, Isimanga siwukuthi, kwaba khona kwabo uthi mayelana amandla esizwe futhi isimo. Ungacabanga a ngemibono mayelana Denmark? Kodwa ngakolunye uhlangothi, ngokuvumelana le Human Development Index, Russia iyindawo lama-77 nesizotha. Kodwa kule simo uyakucabangela zonke izingxenye zomphakathi ezibalulekile, ezifana nezempilo, imfundo nokunye. D. Ingabe iqembu Russian phezulu phezu okuvela izitha ezintsha nezindala e-United States ubuso noma okunye walala izingalo zabo, njengoba kwenza Poland phambi eJalimane lobuNazi noma Prussia ibutho sikaNapoleon? namanje, Russia manje ezahlukene. Yena akanawo amandla kwezomnotho ka okwakusendlini "red", futhi akusho ifa ukholo okwakukhona phakathi nokubusa u-Alexander I-Alexander II. "Inkosi. Autocracy. Ubuzwe "- waphasiswa. Manje abantu bethu elahleka futhi ukhathazekile ngesimo sakhe samanje. Izizathu okumele siziqhenye ngayo izwe akuyona kangaka, futhi uye emanxiweni simiso esidala ngeke isebenze isikhathi eside. Ngakho amaMelika besaba Russian usesimweni esinjalo - iphuzu moot.
Uma thina uthinte emandleni ezempi yezwe, akusona umbuzo wokuthi kungani baseMelika besaba khona amasosha Russian, kodwa akuyona neze kweqiniso ngenxa yabantu bakithi nangenxa izinqubomgomo zethu. Inkinga eyinhloko itholakala ngokungenaphutha nezinye. Inkinga ebaluleke kakhulu ngekusasa eliseduze yilesi: "Ingabe baseMelika Ubesabe Russian futhi njengoba abantu njengoba isimo, njengenhlangano ezama ukubuyisa imibono yabantu?"
Pokeweed: izimbali ukucasha, futhi izithelo ezikhangayo
I-Shakespeare yeshashalazi "Globe". Enye yezemidlalo yasendulo eLondon: umlando
Good isiqophi umdlali i-Android ne-Windows